China Ice Pack mveliso kunye nabathengisi | Huizhou
Iipakethe zomkhenkce ze-Huizhou ze-gel zenziwe ngokukodwa ngokutya okutsha kunye nekhemesti ye-bio kunye nezinye izinto ezinobushushu ngexesha lokuthunyelwa kwazo. Bafanele ukuzisa iqondo lobushushu kwindawo enye ephantsi kolawulo ngokudlulisa ubushushu obupholileyo.
Iipakethe ze-1 zeHuizhou ze-ice zenziwe ngokukodwa ukutya okutsha kunye nekhemesti ye-bio kunye nezinye izinto ezinobushushu ngexesha labo ukuthunyelwa kwetyathanga elibandayo. Bafanele ukuzisa iqondo lobushushu kwindawo enye ephantsi kolawulo ngokudlulisa ubushushu obupholileyo.
2.I-Gel Ice Pack yenziwe ngezinto zotshintsho lwenqanaba (i-PCM) njengefriji yangaphakathi kunye nokusonga okungaphandle okutywiniweyo kwicala elingasemva.Ngeminyaka yamava kubushushu bokupakisha ubushushu bokupakisha, ipakethi yethu yejeli yejeli iphuhliswe kakuhle kulawulo lobushushu olungcono, umgangatho ophezulu kunye nokupakishwa okuhlangeneyo kweemfuno ezahlukeneyo.
3.Sinokubonelela ngesakhelo esimkhenkce esibunjiweyo esime kakuhle esineeengile ezine zangaphakathi ezijikelezileyo, endaweni yezikwere ezinokuba bukhali emva kokuba zibambene. Inkqubo ye- Umjikelo wekona ejikelezayo inokulunge ngakumbi xa kunokwenzeka ukuba iphakheji ikwibhokisi ye-EPS yegwebu ekrweleke ngokulula.
I-1.Gel Ice Pack yenzelwe ukuzisa ukuphola kwindawo ekufutshane nayo, ngokutshisa nokubanda komoya oshushu okanye uhanjiso.
Kwimihlaba yokutya esandula ukwenziwa, zisetyenziselwa ukuhambisa ukutya okutsha, okonakalayo kunye nobushushu, njengoku: inyama, ukutya kwaselwandle, iziqhamo kunye nemifuno, ukutya okulungiselelwe, ukutya okungumkhenkce, i-ayisi khrim, itshokholethi, iilekese, iikeyiki, iikeyiki, itshizi, iintyatyambo, izinto zokuthambisa, ubisi, njl.
Imigca ye-pharmacy, i-Gel Ice Pack isetyenziselwa ukuthunyelwa kwe-reagent ye-biochemical, iisampuli zonyango, ichiza lezilwanyana, iplasma, isitofu sokugonya, njl.
4.Ukuzisebenzisa ngokwakho, zinokusetyenziselwa uncedo lokuqala, iintlungu okanye ukwenzakala, ukuzisa umkhuhlane.
Kwangelo xesha, zikwalungele nokusetyenziswa ngaphandle ukuba zibeka ipakisi yejeli engxoweni yesidlo sasemini, ibhegi epholileyo yokugcina ukutya okanye iziselo ezibandayo xa uhamba intaba, inkampu, iipikniki, ukuhamba ngephenyane nokuloba.
5.Ukongeza, ukuba ufaka ipakethi yejeli enomkhenkce kwifriji yakho, inokugcina umbane okanye ikhulule ukubanda kwaye ugcine ifriji kubushushu befriji xa ucinyiwe.
Ukutshintsha kwesigaba Ubushushu
I-PE / PET
Elaminethiweyo amalaphu angalukanga -10 ℃ ， -15 ℃ ， -18 ℃ ， -25 ℃ ，
Qaphela: Uyilo ngentando iyafumaneka.
1.Non-ityhefu (Izinto zangaphakathi ikakhulu amanzi, Polymer eliphezulu.) Kwaye bavavanywa ngayo Ingxelo ye-Acute Oral Toxicity Report.
2.Easy ukuphatha, kwaye uluhlu olubanzi isicelo ukuba kupholile kufuneka.
Ukusetyenziswa okuphindiweyo ngaphambi komhla wokuphelelwa kwayo.
Izinketho ze-4 ezenziwe ngokwezifiso ezifumaneka kwizixhobo zangaphakathi kuyilo olubonakalayo
5.Ipakethe yomkhenkce ojikelezayo iyafumaneka ukunqanda umonakalo onokwenzeka ngenxa yejeli
Ipakethi yomkhenkce ii-engile ezibukhali.
Ukuqinisekisa ukusebenza kakuhle, nceda uqiniseke ukuba bakhenkce ngokupheleleyo kwi
ifriji, ifriji okanye indlu efrijini ngaphambi kokuyisebenzisa.
2.Ukuba kukho nayiphi na into evuzayo okanye eyonakeleyo, yigungxule ngamanzi uze uyilahle.
3.I-Gel Ice Pack inokusetyenziswa iphindaphindwe ngaphambi komhla wokuphelelwa kwayo.
Egqithileyo Ipakethe ye-Inaliti yamanzi